Moisture ကြောင့် ဆုံးရှုံးနေသလား – XY GROUP OF COMPANIES
XY GROUP OF COMPANIES
YANGON, MYANMAR. +959500 6510, tinaunglay@xy-trading.com
Myanmar Emata White Rice
Myanmar Parboiled Rice
Full Synthetic (Premium Quality Multi-Grade Motor Oil)
EVEREST Motor Oil (Synthetic Blend)
High Mileage (ကီလိုများနေပြီဖြစ်သော ကား များအတွက်)
Heavy Duty Advanced CK-4 Diesel Engine Oil
EVEREST Extreme Duty SAE 20W-50
ATF EVEREST Transmission Fluid
EVEREST ATF T-IV (Full Synthetic)
AdBlue EcoGreen for Diesel Cars
FERTILIZER – GROW UP
Moisture ကြောင့် ဆုံးရှုံးနေသလား
December 20, 2020 July 19, 2020 by admin
လူကြီးမင်းရဲ့ Export ကုန်ပစ္စည်းတွေ ရေငွေ ့(moisture) ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာ ကြုံနေရပါသလား❓❓❓
😀 ယနေ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ စားသုံးမှု သုံးစွဲမှု မယုံကြည်နိုင်လောက်အောက် မြင့်တက်လာနေပါတယ်။ တစ်နှစ်မှာ ၁.၇ ဘီလျံ မက်ထရစ်တန် ရှိသော ကုန်ပစ္စည်း တွေကို ကွန်တိန်နာတွေနဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်နေကြတယ်။့အဝတ်အထည်တွေ။ စားသောက်ကုန်တွေ။ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးဝါးနဲ့ ဆေးပစ္စည်းတွေ။ နေ့စဉ် အသုံးပြုနေတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ။ ယာဉ် နဲ့ အပို ပစ္စည်းတွေ ကို ပေါ ့။
😧 ဒါပေမယ့် တစ်နှစ်မှာ ဒေါ်လာ5ဘီလျံ ဖိုး ခန့် ပျက်စိးဆုံးရှုံးနေပါတယ်တဲ့။
🚢 အဲ့ဒါရဲ့ 10% ဟာ ကွန်တိန်နာတွေထဲမှာ ရေငွေ ့ကြောင့် ပျက်စီး ဆုံးရှုံးရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
👉ဒါဟာ သင့်ရဲ့ အမြတ်ငွေတွေ၊ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ ပုံရိပ် Brand နဲ့ Customer တွေရဲ့ယုံကြည်မှုကို ဆုံးရှုံးရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ဆုံးရှုံးမှု လည်း ဖြစ်တယ်။
❓ ဘယ်လို ကာကွယ်နိုင်ပါသလဲ ။
👉 ရေငွေ့ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးရတာကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် Absortech က ၁၉၉၆ ကစပြီး စွန် ့ဦး တည်ထွင်သူ ဖြစ်လာပါတယ်။
👉 ရေငွေ ့ကြောင့် ပျက်စီး ဆုံးရှုံးရတာကို ကာကွယ်ပေးမယ့် အကျိုးသက်ရောက်မှု အပြည့်ရှိပြိး အလွယ်တကူ အသုံးပြုလိုရတဲ့ ရေငွေ ့စုပ် ပစ္စည်းများကို Absortech က ထုတ်လုပ် ဖြန် ့ဖြူးခဲ့ပါတယ်။
👍 ကယ်လဆီရမ်ကလိုရို်ဒ် ကို အခြေခံထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Desiccants ဖြစ်လို့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီး ခြင်း မဖြစ်ပါ။
👌 သုတေသန နဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အရည်အသွေး တိုးတက်ရေး (Research and Development) ဌာနရဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်းမှုနဲ ့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ ရေငွေ ့စုပ် ပစ္စည်းများက သင့်ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းများကို ကွန်တိန်နာ အတွင်း ရေငွေ ့ကြောင့် မပျက်စီးအောင် အကောင်းဆုံး ကာကွယ် ပေးပါတယ်။
(ph: 09 685050021 / 09 500 6510)
လူႀကီးမင္းရဲ့ Export ကုန္ပစၥည္းေတြ ေရေငြ ့(moisture) ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးတာ ၾကဳံေနရပါသလား❓❓❓
😀 ယေန႔ကမၻာႀကီးရဲ့ စားသုံးမႈ သုံးစြဲမႈ မယုံၾကည္နိုင္ေလာက္ေအာက္ ျမင့္တက္လာေနပါတယ္။ တစ္ႏွစ္မွာ ၁.၇ ဘီလ်ံ မက္ထရစ္တန္ ရွိေသာ ကုန္ပစၥည္း ေတြကို ကြန္တိန္နာေတြနဲ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနၾကတယ္။့အဝတ္အထည္ေတြ။ စားေသာက္ကုန္ေတြ။ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးဝါးနဲ႔ ေဆးပစၥည္းေတြ။ ေန႔စဥ္ အသုံးျပဳေနတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြ။ ယာဥ္ နဲ႔ အပို ပစၥည္းေတြ ကို ေပါ ့။
😧 ဒါေပမယ့္ တစ္ႏွစ္မွာ ေဒၚလာ5ဘီလ်ံ ဖိုး ခန႔္ ပ်က္စိးဆုံးရႈံးေနပါတယ္တဲ့။
🚢 အဲ့ဒါရဲ့ 10% ဟာ ကြန္တိန္နာေတြထဲမွာ ေရေငြ ့ေၾကာင့္ ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
👉ဒါဟာ သင့္ရဲ့ အျမတ္ေငြေတြ၊ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ကုန္ပစၥည္းရဲ့ ပုံရိပ္ Brand နဲ႔ Customer ေတြရဲ့ယုံၾကည္မႈကို ဆုံးရႈံးရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံးရဲ့ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ဆုံးရႈံးမႈ လည္း ျဖစ္တယ္။
❓ ဘယ္လို ကာကြယ္နိုင္ပါသလဲ ။
👉 ေရေငြ့ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးရတာကို ကာကြယ္ဖို့အတြက္ Absortech က ၁၉၉၆ ကစၿပီး စြန္ ့ဦး တည္ထြင္သူ ျဖစ္လာပါတယ္။
👉 ေရေငြ ့ေၾကာင့္ ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးရတာကို ကာကြယ္ေပးမယ့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အျပည့္ရွိၿပိး အလြယ္တကူ အသုံးျပဳလိုရတဲ့ ေရေငြ ့စုပ္ ပစၥည္းမ်ားကို Absortech က ထုတ္လုပ္ ျဖန္ ့ျဖဴးခဲ့ပါတယ္။
👍 ကယ္လဆီရမ္ကလိုရို္ဒ္ ကို အေျခခံထုတ္လုပ္ထားတဲ့ Desiccants ျဖစ္လို႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီး ျခင္း မျဖစ္ပါ။
👌 သုေတသန နဲ႔ ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြး တိုးတက္ေရး (Research and Development) ဌာနရဲ့ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈနဲ ့ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ အရည္အေသြးျမင့္မားတဲ့ ေရေငြ ့စုပ္ ပစၥည္းမ်ားက သင့္ရဲ့ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကြန္တိန္နာ အတြင္း ေရေငြ ့ေၾကာင့္ မပ်က္စီးေအာင္ အေကာင္းဆုံး ကာကြယ္ ေပးပါတယ္။
Everest Motor Oil @ Mandalay Motor Car & Bike Show (6-9 December 2019)
EVEREST ATF T-IV (Full Synthetic) November 2, 2020
EVEREST Extreme Duty SAE 20W-50 August 10, 2020
CVT Transmission Fluid August 10, 2020
ATF EVEREST Transmission Fluid August 10, 2020
Heavy Duty Advanced CK-4 Diesel Engine Oil August 10, 2020
High Mileage (ကီလိုများနေပြီဖြစ်သော ကား များအတွက်) August 10, 2020
EVEREST Motor Oil (Synthetic Blend) August 10, 2020
Full Synthetic (Premium Quality Multi-Grade Motor Oil) August 10, 2020
ဘယ်အင်ဂျင်ဝိုင် သုံးရမလဲ July 26, 2020
Moisture ကြောင့် ဆုံးရှုံးနေသလား July 19, 2020
Everest Motor Oil @ Mandalay Motor Car & Bike Show (6-9 December 2019) December 14, 2019
EVEREST Motor Oil @ CarsDB Auto Show 2019 November 20, 2019
Get Direction to XY Trading Company
15W-40 API-CK4 for Heavy Duty Diesel
L-9, NweTharGi Street, Bayint Naung Pwe Yon Dan, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.
+959500 6510 +9596850 50021
© 2022 XY GROUP OF COMPANIES • Built with GeneratePress